Mourinho oo wada-hadal la furaya Mesut Ozil. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Mourinho oo wada-hadal la furaya Mesut Ozil.
Mourinho oo wada-hadal la furaya Mesut Ozil.
Posted by: radio himilo September 14, 2017
Muqdisho – Tababaraha Manchester United, Jose Mourinho ayaa lagu soo warramayaa inuu doonayo in uu wada hadalo qandaraas ah la yeesho qadka dhexe ee kooxda Arsenal, Mesut Ozil.
Heshiiska haatan uu ku joogo laacibkan reer Jarmal waqooyiga London ayaa dhacaya xagaaga soo socda, sida ay qortay Jariiradda Bild, Mourinho ayaa jeclaan lahaa inuu u dhaqaaqo 28 jirkan.
Rajadii qandaraas kordhinta oo uu Ozil ka rajeynayay Arsenal ayaa hakad ku yimid ka dib markii macalinka Gunners, Arsene Wenger uu ka gaabiyay xil iska saarka heshiiska laacibkan.
Mourinho, ayaa tababare u soo noqday Ozil markii labadoodaba ay joogeen kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Real Madrid, waxaa lagu soo waramayaa inuu doonayo in xiddiga reer Jarmal ka dhigo ciyaaryahan United una soo wareejiyo Old Trafford.
Ciyaaryahankii hore ee Madrid, ayaa la rajeynayaa in la nasiiyo kulanka Europa League ee ay la ciyaarayaan FC Koln caawa si uu shaqo adag u qabto kulanka horyaalka ay kooxdu ciyaari doonto toddobaadka soo socda.
Xagaagii 2012-2013 macalinkii hore ee kooxda Man Utd, Sir Alex ayaa Arsenal kala soo wareegay laacibkii ugu muhiimsanaa markaa ee Robin Van Persie, haddii uu markaan Mourinho la wareego Ozil waxa ay la micno noqon doontaa maadeys kale oo ay la kulmi doonaan taageerayaasha Gunners.
Mustaqbalka laacibka garabka uga ciyaara kooxda ee Sanchez ayay xaaladiisu fadhin waxaana laga yaabaa in kahor sanadka soo aadan ay kooxdu midkood dhumiso Ozil iyo Sanchez.
Previous: Leon Osman: ‘Everton waxay ku fashilantay inay beddel u hesho booskii Lukaku.’
Next: Lakulan – Ninka badbaadiyay nolosha 700 Eeyo ah.